Mitombo eo amin'ny varavarankelin'ny lavaka mandritra ny taona - Watercress Sowing - 2019
Ahoana no ahafahana manamboatra kakazo ao an-trano amin'ny varavarankely
Mampitombo ny kisoa eo amin'ny varavarankely amin'ny ririnina, ianao dia hiaro ny toetrany mahasoa ho an'ny ambony indrindra ary hampanan-karena ny vatanao amin'ny kalesy, vy, iodine, phosphorus, potassium, vitamins B sy C. Ny solifara iankinan'ny aina voatefy ao amin'ilay zavamaniry dia manome ny salady anao ny fofona.
Karakarao fandroana ao an-trano
Fisotroana sy fanafana ny tany
Fomba hanamboarana crème tsy misy tany
Cress fitomboana eo amin'ny varavarankely
Ho an'ny fambolena kalsioma dia mila manomana ny lovia, ny tany, ny drafitra sy ny voa. Toy ny tavoara, afaka mampiasa tavoahangy mofomamy na zavatra hafa ianao, raha mbola misy lavaka. Ny famafazana ranomamy dia azo ampifandraisina amin'ny herisetra hafa amin'ny varavarankely.
Any amin'ny faritry ny lovia misy haavony 2-3 cm dia mandatsaka draina izahay, ary ambonin'izany dia mandatsaka ny tany amin'ny siora 2-4 cm izahay. Tsara kokoa ny mampiasa ny voankazo voajanahary efa voavolavola, fa ny fanasitranana ary manana zavatra ilaina ho an'ny fitomboan'ny zavamaniry.
Voa maina ny ahitra ao anaty rano vera ary ampitaina amin'ny sehatra iray eo ambonin'ny tany. Mamafaza voa amin'ny tany hatramin'ny 1 cm matevina, manangona azy ary rano. Apetrakay eo ambany sarimihetsika ilay fitoeran-drano, alao ao anaty toerana maizimaizina izy ary andrasao ny fikajiana voa. Tokony hiseho 3 andro ny sotroka voalohany amin'ny salady ao anaty vilany.
Zava-dehibe izany! Mora kokoa noho ny volomparasy ny ravin-kazo misy ravina maitso.
Ity zavamaniry ity dia miavaka amin'ny hafa amin'ny tsy fisainany ary manondro karazam-bary maitso eo amin'ny varavarankely. Ity karazana salady ity dia tsy mitaky ezaka, saingy anisan'ny zavamaniry misy aloky ny aloky ny aloky ny alokaloka, hany ka mahazo aina na dia any amin'ny varavarankely avaratra aza.
Aorian'ny fiterahana voa, nesorina ilay sarimihetsika ary napetraka eo amin'ny sisin'ny varavarankely ireo boaty. Ataovy azo antoka fa tsy mameno ny varavarankely ny battera mafana. Hisy vokany ratsy amin'ny fitomboan'ny siramamy izany.
Ny voa dia afaka manalefaka amin'ny mari-pana maherin'ny 5 ° C, fa ny hafanana tsara indrindra ho an'ny fitomboan'ny cress dia hafanana 10-18 ° C. Mba hihazonana io hafanana io, dia voapoizina ny rano ary mangatsiaka ny efitrano.
Zava-dehibe izany! Amin'ny mari-pana kokoa mihoatra ny 25 ° C, ny famonoan-davenona dia afaka manova haingana ny tanana ary lasa tsy mety amin'ny fanjifan'ny olombelona.
Ho an'ny tsiran-tsakafo tsy tapaka amin'ny salady dia tsara kokoa ny mamafy amin'ny ampahany amin'ny andavanandro 7-10 andro. Amin'ity tranga ity dia hanam-potoana hampiasana zana-tany ianao.
Ny fitandremana an'io zavamaniry io dia tsotra. Ilaina ny mihazona ny fahosan'ny tany sy ny fanaraha-maso ny hafanana ao amin'ny efitrano.
Ny tany dia tokony ho maina saingy tsy misy rano.. Ny tsy fahampian-tsakafo sy ny tsy fahampian-tsakafo dia mihatra amin'ny zavamaniry. Ny fandroana ny zavamaniry dia tokony atao amin'ny alalan'ny fitsanganana be dia be isan'andro isaky ny 2-3 andro, avy eo ny menaka dia ho mamy sy malefaka.
Koa satria ny vanim-potoanan'ny fitomboana eo amin'ny famatsian-drano dia kely, tsy misy entona amidy amin'ny tany. Ilaina ny fampiasana ny fambolena ny trano nividianana trano izay manana vongan-drano ampy.
Nefa ny zavamaniry dia afaka manome ravina vaovao rehefa tapaka. Amin'ity tranga ity, afaka mamelona ny zavamaniry amin'ny diloilo mangatsiaka ianao; Tokony hampihena ny fifantohana amin'ny torolàlana nomena azy, satria tena tsara ilay zavamaniry.
Ny haavon 'ny rivotra ao amin' ny efitrano dia tokony ho avo, satria ny zavamaniry dia ny fahamoram-pitiavana. Raha miova ny hamandoana, dia hitarika ho amin'ny lolom-po, henjana ny ravina ary ny fahaverezan'ny tsiro.
Fantatrao ve? Nampiasa crème crème ny Hippocrates mba hanadiovana ny ra sy hiverina amin'ny biby marary.
Azo atao ny mampiasa zavamaniry iray ho an'ny sakafo amin'ny 7 cm ka hatramin'ny 10 cm eo ho eo. Ampiasao hendasina ny ravinkazo miaraka amin'ny lobaka kely. Ny kisoa dia ampiasaina vaovao, noho izany dia mila manapaka ny habetsa hampiasainao ianao.
Ny vidin'ny sakafo sy ny kaloria 100 g amin'ity vokatra ity dia: proteinina -2.6 g, fatsim-bary - 0,7 g, voambola - 6 g, kilaometatra - 32 kcal. Ity zavamaniry ity dia ampiasaina ho fanampin-tsakafo ao anaty salady, ary koa fanatavezana ny hena sy trondro. Mpiasam-bokatra tsara tarehy, atody ary tsaramaso ny ronono.
Fantatrao ve? Any amin'ny firenena afrikana sasantsasany dia maniry ny sakafon'ny zana-ketsa.
Ny tena mampiavaka an'io zavamaniry io dia ny tsy fisian-drano amin'ny fisian'io tany io. Afaka maniry amin'ny lamba volon-doha, sponge na tavy fanosotra ny vatomamy.
Apetraho eo ambanin'ny faritry ny lovia ny fonon-javatra miaraka amin'ny farafahakeliny hatramin'ny 2 cm ary atsofoka amin'ny rano. Atsofohy ao anaty vera ny masomboly ary mameno azy ireo amin'ny rano. Ilaina izany mba hahafahan'izy ireo mizara mitovy amin'ny sehatra iray eo amin'ny fonosana.
Manangana fiantraikan'ny taza-maso amin'ny sarimihetsika cellophane izahay ary hametraka izany eo amin'ny varavarankely.
Cress dia azo ampiasaina tsy misy substrate - anaty rano. Ity fomba ity no mora sy mora lafo. Herinandro aorian'ny famafazana dia salady ny salady.
Ilaina ny manamboatra dite sy rano fisotro. Apetraho eo ambonin'ilay kaopy ny zezika, atsipazo ny masomboly ary ampidino azy ireo amin'ny rano amin'ny 30 ° C. Tokony hisy rano ampy hanalana ny voa.
Tsy maintsy ampitaina amin'ny lafin-javatra rehetra amin'ny sehatra izy ireo. Ny tsimok'aretina dia hitsiry ao anatin'ny roa andro, ary hiditra ao anaty kaopy iray ny fakany. Ity kisoa katsaka ity dia azo ampiasaina amin'ny sakafo miaraka amin'ny fakany.
Azo antoka fa tsy ilaina ny fisian'ny kisoa, indrindra amin'ny ririnina. Ampiasao ny cress miaraka amin'ny menaka oliva sy ny sira citrouille, ary ny vatanao dia hahazo ny habetsan'ny sakafo sy ny vatana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ahoana no ahafahana manamboatra kakazo ao an-trano amin'ny varavarankely